Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Cadaalad Darrada Itoobiya Maxay Soomaalidu Ka Baran Kartaa?
Maqaal: Cadaalad Darrada Itoobiya Maxay Soomaalidu Ka Baran Kartaa?
Posted by ONA Admin	/ June 22, 2018
Itoobiya waa wadan ay ku nool yihiin in ka badan 90 qawmiyadood, wuxuuse xukunku & dhaqaaluba gacanta ugu jiraan kolba qolada haysata ama uu gacanta ugu jiro Qori “Gun” oo ah kuwa xukuma wadanka. Hadaba sadexda qabiil ee haysta qoryaha waa Axmaarada, Oromada & Tigrayga.
Hadaad rabto inaad ogaato xaalada wadan “gaar ahaan cadaalada & horumarka” waxaad eegtaa qaab-dhismeedka maamulka dalka kajira. Hadduu maamulku yahay mid loo dhan-yahay, qowmiyaadka & shucuubta dalka ka dhex muuqdaan, fursadaha shaqo & dhaqaale, ganacsi & waxbarasho loo wada dhan yahay, waxaad ogaataa inuu wadankaa yahay wadan mustqabl & hiigsi leh. Haddii aad arimahaa ka waydo waxaad ogaataa inuu yahay wadan faashilmay ama guul daraystay (fragile & failed state).
Wadan fashilmay ama guuldaraystay waa wadan u nugul dhibaatooyin kala duwan & inuu bur-buraa, waxaana lagu gartaa ama tilmaan u ah dhaqaalaha oo hooseeya, maamulka dhexe oo xun ama taag-daran aan awood lahayn, awoodda dawlad-goboleedyada oo xoogan, sharciga oo hooseeya, dulmiga oo bata, sinaanta shacabka oo hooseysa, kalsoonida shacabka oo meesha ka baxada, iyo waxyaab kale oo bada. Caddaalad darada dalka ka jirta waxay gaadhay heer qomiyada / qabill walba dhaxdeeda is-faquuqdo, oo qaar kamid ah dadka ku abtirada qomiyadaa / qabiilkaa laga dhaariyo inay wixii mansab ama nacfi (dhaqaale ah) ee la wada boobabayay.
Gobolka Oromada waxaa la sheegaa in 50-80% shacabka Oromadu yahay Muslim. 21 maxad-xafiiseed oo ka jira maamulka Oromiya, 1 ayaa Muslim ka ah, 20-ka kale waa Kirishtaan! Waxaa kale 45 masuul Baarlamaan, 5 kaliya ayaa Muslim ka ah, halka 40-ka kale ka yihiim Kirishtaan!. Gobolka Axmaaradu wuxuu ka kooban yahay 10 gobol & Bahirdar (special zone). 40% (4 out of 10) gobolada Axmaaradu waa deegaanada Muslimiinta. Hadaba waxaa la sheegaa in 20-35% shacabka yahay Muslim. 14 maxad-xafiiseed oo ka jira Maamulka Axmaarada, 1 ayaa Muslim ka ah, 13-ka kale waa Kirishtaan! Iskaba daa ama haba ka hadlin Koonfurta oo hooy u ah Kirishtaan (Borotistaan).
Dhanka ka qaby-galka dowladd dhexe & awood qeybsiga shucuubta dalku waa sidan.
– Addis Ababa Region: dadweynaha Addis Ababa waa 3,273,000, halka xumnaha Baarlaamka Heer Federaal uu yahay 23 Xubnood.
– Tigray Region: dadweynaha Tigray waa 5,056,000 halka ay Baarlaamka Federaalka ku leeyihiin 38 Xubnood.
– Somali region: shacabka Soomalidu waa 8,518,000 halka ay Baarlaamka Federaalka ku leeyihiin 23 Xubnood.
Hadaba waxaa halkaa kaaga muuqda in Soomaalidu shacab ahaan ay ka badan tahay Addis Ababa & Tigray, halka xubnaha baarlamaanka ee labadaa gobol ka badan yihiin Soomaalida!! Waxaa isu key qaban la’a xaqiiqadaa & marka aqoon-yahan & masuul Soomaaliyeed uu fagaare ama media la soo istaago “Soomaalida Kililku waxay kamid yihiin Itoobiya, waxayna Heleen xaqoodi, maamulka dalka ayay qayb ka yihiin”. Waxaan kuwaa ku latalin lahaa inay Ilaahay ka xishoodaan, naftooda ixtiraamaan, dadka Soomaaliyeedna ayna meel uga dhicin, waxaadna ogaataan in maanta maalin aan ahayn & Allah agtiisa lagu xisaabtami doono Inshaa Allah!
Ninkaad kabo ka tolanayso waxaa la fiiriyaa kabihiis: hadaba akhristow, waa adiga & garaadkaada xaal halkuu taagan yahay dalka Itoobiya iyo cadaalad darrida ka jirta. Wadanka cadaala halkaa ka taagan, ee qowmiyad-qowmiyad isu dooxanaya maxay Soomaali ka faa-iideysan marka Soomaaliya ku biirto Itoobiya “waa sida uu sheegay Abiy Axmad ra’iisal wasaaraha Itoobiya. Muxuu yahay waxa Itoobiya laga sugaa ama laga filayo markii afar dakadood oo Soomaali leedahay lasiiyo iyo waxa xiga oo ah inay Addis Ababa caasimad u noqoto Soomaalida?
Soomaalidii hore waxay ahaayeen kuwo garaadkoodu sareeyo, dulli & dulmi aan ogoleyn, kuwa maantana sidaa inay u fikiraan ayaa laga sugayaa. Hadaba haduu xaalka Itoobiya sidaa yahay, ama sidaa dhaxdeeda isku samaynayso, Soomaalidii ku hoos noolaydna sidaa ula dhaqmeyso, muxuu yahay wanaaga & waxa aad ka sugtaa oon ka ahayn gumeysi & adoonsi cusub, dhaqan bi’in & fuxshi bulshada dhexdeeda.
Soomaali ha is-raacdo, danteeda ha ka shaqayso. Soomaali waxay haysataa ama leedahay dhul & bad, kheyraad aan meel kale laga helin, iyo aragti & fikir fayow & sumcad wanaagsan oo u baahan in cadowga laga ilaaliyo.
Aqoon Yahan Arimaha Geeska Africa Wax Ka Qora.